Hahazo anarana anio na rahampitso… : ho tsenain’ny rivodoza ny taona vaovao | NewsMada
Hahazo anarana anio na rahampitso… : ho tsenain’ny rivodoza ny taona vaovao
Par Taratra sur 30/12/2017
Mananontanona ny rivodoza. Efa ao amin’ny 2.000 km miala atsinanan’ny Nosy ny misy ilay andian-drahona mety hivadika ho rivodoza. Hikija ny orana ny sasakalin’ny faran’ny taona sy ny taom-baovao.
Vao miandoha ny taona dia hanafika ny rivodoza. Vinavinain’ny mpamantatra ny toetr’andro hivadika ho rivodoza ary hahazo anarana anio na rahampitso ilay andian-drahona matevina ao amin’ny ranomasimbe Indianina.
Omaly, raha ny tazana tamin’ny zanabolana, tany amin’ny 2.000 km miala an’i Madagasikara no nisy ilay andian-drahona matevina. Etsy andaniny, misy andian-drahona hafa mandrakotra an’i Madagasikara izay mahatonga ny orana saika manerana ny Nosy. Hitohy, araka izany, ny orana anio sy rahampitso hatramin’ny fiandohan’ny taona iny.
Mila miomana amin’izany ireo rehetra mikasa ny hivoaka ny trano hamonjy ny fety aman-danonana hamaranana ity taona 2017 ity. Torak’izany ireo rehetra hamangy ray aman-dreny sy fianakaviana ny voalohan’ny taona satria heverina ho efa rivodoza mihitsy no hisy amin’izany raha ny vinavinan’ny Meteo malagasy.
Nanomboka ny alakamisy, nikija ny orana teto Antananarivo sy ny manodidina. Efa misy ny rano miakatra manapaka ireo tetezan-kazo sasany mampifandray ny fokontany any anaty tanàna. Tsy mbola tazana kosa ireo traboina.
Tsiahivina fa tamin’ny herintaona toy izao, maina tanteraka ny andro. Ritra ny rano sy ny lavadrano teto Antananarivo. Nisy fotoana aza maty an-drano ny trondro tamin’iny Ikopa iny satria ritra ny rano, tsy- ampy niainan’ireo hazandrano intsony.
Ankehitriny kosa, betsaka ny rotsak’orana, ahina ny fiakaran’ny rano amin’ny faritra iva. Na izany aza, nilaza ny avy amin’ny Apipa fa hisy ny fanavaozana ny « stations de pompage » 5 eto Antananarivo ialana amin’ny mety hisian’ny tondra-drano amin’ny faritra iva.